Ny pôrnôgrafia dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana - Ny valisoa fanorenana
Home Ny fijerena sary vetaveta
Ireo matihanina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana dia mitatitra ny fiakaran'ny vidin'ny aretin-tsaina sy ny neuro-developmental amin'ny tanora ankehitriny. Betsaka ny olon-dehibe koa no miaina olana ara-pahasalamana. Marina ve fa misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ny pôrnôgrafia? Ny fikarohana dia manondro ny fiantraikan'ny fampiasana an-tsokosoko ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Misy fiantraikany manokana amin'ny lehilahy ireo fepetra ireo. A 2015 Review by Love et al. Hoy ny
Ny vaovao tsara dia ny fanasitranana azo atao. Manampy izany raha mahatakatra ny fomba fiovana ny atidoha rehefa miaina zavatra samihafa eo amin'ny fiainanao ianao.
Ao amin'ity fizarana ity ny The Reward Foundation dia manolotra ireo fomba maro ahafahan'ny fahasalamantsika miseho amin'ny fampiasana ny aterineto. Mifantoka amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet izahay.
Mety hanova ny atidoha sy hanova ny vatana ny sary vetaveta amin'ny Internet. Izany dia mety hitarika ny olona hampivelatra ny fitondran-tena mahatsiravina toy ny fiankinan-doha. Raha tsorina dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ny sary vetaveta. Mamafa ireo olana ireo izahay ao amin'ireo pejy manaraka.